Mayelana NATHI - XIAMEN GACHN TECHNOLOGY CO., LTD.
Ubuchwepheshe be-Gachn (Ikhodi Yesitoko: 832368)igxile endaweni yokukhiqiza imishini ehlakaniphile futhi ilwela ukwenza isixazululo sokwakheka esenziwe ngensimbi sibe yinto engokoqobo kumakhasimende ethu. UCachn ubambe elikhulu iqhaza ekufayweni kokwenza imishini yokufaka amaphepha emishini yasendlini kanye nemishini ngokunikeza ukudlala okugcwele kubuchwepheshe bayo obuhamba phambili nasekupheleni kwensiza.
Ubuchwepheshe be-Gachn iphendula ngamandla ku-"Mind in China 2025" isu likazwelonke, ihlose ukuthambekela kwemishini yokusebenza kwamathuluzi ahlakaniphile futhi ibeka intshisakalo nomzamo wokuguqula “ifektri engahlelwanga” ibe yinto engokoqobo kumakhasimende ethu.
Okwamanje ngesikhathi, ngaphansi komkhiqizo we-GACHN ®, sinomshini wokubala wokufaka we-automated ngokugcwele kanye nomshini wokufaka isixazululo we-turnkey wemikhiqizo efana ne-sanching napkin, i-baby diaper kanye ne-wipes eyomile neyimanzi nokunye nokunye. Ngaphezu kwalokho, sihlela ukufaka amaphakethe wokudla kanye nokufakwa kwezimonyo kuphothifoliyo yethu yomkhiqizo.
Ubuchwepheshe be-Gachn yasungulwa ngonyaka ka-2011. Kwa-Gachn, sinamathela kwifilosofi yebhizinisi “eluselwe kumakhasimende” ngaso sonke isikhathi. Unyaka nonyaka ngaphezulu kwe-10% yemali yonyaka iya ekutshaleni iR & D. E-Gachn, sibeka wonke umphefumulo wethu nengqondo ukukhiqiza inani lamakhasimende. Nge-dong kanjalo, imikhiqizo nezinsizakalo zomkhiqizo we-GACHN ® zibonakala kabanzi emakethe. Ngokubuya, inkampani futhi ihlangabezane nomzuzu wokukhula okumangalisayo ngokukhula kwemali engenayo okungaphezulu kuka-50%. Kusukela manje, inkampani inamandla okukhiqiza okukhiqizwa okukhiqizwa ngonyaka okukhulunywa ngaphezu kwamasethi angaphezu kwangama-200. Kuyo yonke le minyaka, uGachn usezithuthukisile waba ngumshini wokuncamela wokufakelwa okhethiweyo nomhlinzeki wemishini yamabhizinisi wokukhiqiza amaphepha asekhaya.
Umgomo webhizinisi: Ukugxila kwamakhasimende
Umsebenzi: Ukukhiqiza imikhiqizo efanelekile ngokukhalipha futhi idale amandla kumakhasimende.
Umbono wethu: Ukuba ngumkhiqizo wokuqala emhlabeni jikelele.
Izindinganiso: Ubulungiswa, Ukuqothuka, Okuphelele, Win-win
Ukungakhethi: ukuncintisana okuhle, funa iqiniso emaqinisweni
Ukuqasha: Ukuze ube yisibonelo, othandekayo ukuthatha umthwalo wemfanelo, chanllange imithetho
Iphelele: ukuthuthuka okuqhubekayo, yenza ukuphelela kube okuphelele, ungayeki ukuthuthuka
Win-win: win-win ngekhasimende, win-win nabasebenzi, win-win nabaphakeli.
Umkhiqizo wokukhishwa kukaGachn Technology nezixazululo zokupakisha:
1、umshini wokubala othomathikhi othomathikhi kanye nezixazululo zokupakisha zama-napkins zokuhlanzeka kanye nama-panty liners
2 、 umshini wokubala othomathikhi othomathikhi kanye nezixazululo zokufakwa kwekhanda ingane
3 、 Ijubane eliphezulu elimanzi lisula umugqa owodwa wokukhiqiza kanye nama-vipande amaningi, umshini wokubala-wokubala
4 、 Umshini wokufaka izicubu ezithambile wobuso bezicubu zomthambo kanye nomzila ombaxambili, umshini wokufaka izicubu zesikhwama
I-5 speed Ijubane eliphakeme kakhulu, lokubala nokufakelwa kokuphonsa ithawula lasendlini yangasese elilahlwayo
I-6 、 ukukhiqizwa kwesivinini esiphezulu kanye nomugqa wokupakisha we-mask ebusweni, isivinini esikhulu sokugcwalisa imaski yobuso nomshini wokubopha
Ukuhambisana nesinyathelo semakethe, sihlala sithuthukisa thina futhi sisenza siphelele.
Semukela ngemfudumalo abangane bethu emhlabeni wonke ukuze basithinte ukuze sibambisane kwezebhizinisi isikhathi eside. Silindele ngabomvu ukusungula ukusebenzisana ngokubambisana ne-win-win ngokubambisana nawe maduze!